पदको ध*रहरा बाट सबै बामपुड्के देखिए, से*रोफेरो सबै मेरो भो: पुण्य गौतम – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
पदको ध*रहरा बाट सबै बामपुड्के देखिए, से*रोफेरो सबै मेरो भो: पुण्य गौतम
पुण्य गौतम भन्ने बित्तिकै सबैको आँखामा झलल हुन्छन् नै ! उनी सदैव व्यथितीहरु साथै सामाजिक घटनाहरुको बिरुद्वमा आफ्ना आवाजहरु सशक्त ढङ्गले सकारात्मक ढङ्गबाट बुलन्दीत गर्दै आएका छन्। नेकपामा उच्च धार भएका यी युवाले प्रायः सबै सँग डिवेटमा पौठाजोरी मार्दै आएका छन्। ७० करोडको काण्ड पस्चात उनी संन्जालमा लेख्छन् :
पदअनुरूप शालिनता,नैतिकताको खडेरीभो/तित्राको मुखै बैरी,थुन्सेको बिरालो म्याउ गर्यो/खिर्राको बोटम जाईफल फलेन/मरिच चाउरियो उसकै रागले!
घातक कागे बचनले पतन भो/धोतीको जुम्रो टोपीमा पुग्दा उत्पात चुरिफुरी भो/घोसेमुण्टो लाएर अझै मिथकीय फिनिक्स चराझै खरानीबाट उडने चाहना छ!
पदको धरहराबाट सबै बामपुडके देखिए/सेरोफेरो सबै मेरो भो/धरहरा ढल्यो/मरेको जीवलाई उपियाले नि छोडे/बर्खामा उर्लेको खहरे स्याप्पै सुकेछ!
प्रायः हरेक तवरले केहीँ न कतैंबाट उनी एक पल्ट न एक पल्ट विवादमा आउँदै गरेको पाईएको छ । करोडको काण्डमा भने उनीले कडै रुपले स्टाटस पोष्ट्याइएको पाईएको छ । नेकपा निकट नै भएर होला प्रायः जोगाउन खोज्ने प्रवृत्त देखिन्थ्यो नै तर आज आएर बाण कडा नै दिएका छन्। सहि नेतृत्वलाई साथ दिऔं ।
Previous वि*नोद चौधरीलाई गोकु*ल बाँस्कोटाले यत्ती सम्म भनेका थिए! पुरा प’ढ्नुहोस्।
Next पुरा पढ्नुहोस्, बाँस्कोटाको का’र्यकालमा ४७ अर्ब घो**टाला!